Liverpool oo 110 milyan oo gini ku qarash-gareynaysa labo xiddig oo ka tirsan kooxda Wolverhampton Wanderers – Gool FM
(Liverpool) 13 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa la soo warinayaa inay 110 milyan oo gini ku qarash-gareyn doonto labo xiddig oo ka tirsan naadiga Wolverhampton Wanderers.
Reds ayaa la sheegay inay 110 milyan oo gini ku bixinayso labada ciyaaryahan ee Adama Traore iyo Ruben Neves kuwaasoo ka wada tirsan kooxda Wolves inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Traore, kaasoo dhaliyey lix gool isla markaana caawiye ka ahaa 10 gool oo kale 43 kulan oo uu kooxdiisa u ciyaaray ayaa si weyn loola xiriirinayey isbuucyadii dhowaa kooxda ku guuleysatay koobka horyaallada Yurub.
Tababaraha Reds ee Jurgen Klopp ayaa la sheegay inuu la xiriiray xiddigii hore ee Barcelona si uu ugala hadlo suurtogalnimada uu ugu dhaqaaqi karo garoonka Anfield, laakiin sida laga soo xigtay Wargeyska The Sun, Liverpool ayaa sidoo kale xiiseynaysa Ruben Neves.
Warbixinta ayaa sheegaysa in kooxda reer Merseyside-ka ay u aragto xiddiga reer Portugal inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican ee khadka dhexe ka ciyaaraya, iyadoo ay jirto hubaal la’aanta kooxda ee mustaqbalka Georginio Wijnaldum.
Neves ayaa la rumeysan yahay inuu Wolves ugu qiimeysan yahay adduun dhan 50 milyan oo gini, halka Traore laga yaabo inuu ku kaco ilaa iyo 60 milyan oo gini, isagoo horumarkiisa ku noqday mid ka mid ah weeraryahannada loogu xiisaha badan yahay horyaalka Premier League.
Tottenham Hotspur iyo Manchester City ayaa sidoo kale labadaba horey loola xiriirinayay Neves, kaasoo garoonka Molineux uga soo dhaqaaqay kooxda reer Portugal ee Porto xagaagii 2017-kii.